Hasiaka ny dia an-habakabaka eran'izao tontolo izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Hasiaka ny dia an-habakabaka eran'izao tontolo izao
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao • Tourism • Dinika fizahan-tany • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny fiverenana amin'ny fiaramanidina aorian'ny COVID-19 dia toy ny mianatra manidina indray.
Ny hoavin'ny fiaramanidina dia tsy hitovy, ary ny sasany milaza fa ho lozabe ny dia.
Ireo flier mahazatra dia samy niaina ny hatezerana sy ny fahasosorana noho ny fijanonany tamin'ny tara. Miaraka amin'ny fidinan'ny lanitra "sariaka" indray ny olona amin'ny isa maro kokoa, tara kokoa noho ny mahazatra no andrasana.
Ny sidina noeritreretinao ho 45 minitra dia nivadika fitsangatsanganana an-tanana naharitra ora maromaro. Rehefa miharatsy hatrany ny toe-tsaina ao anaty fiaramanidina dia manontany tena ny olona matetika hoe: "Ara-dalàna ve izany?"
Ny valiny izay tsy tianao ho re dia ny ara-dalàna ny fihazonanao ny tara ary araka ny fahitana azy mialoha, dia mety hanjary hanome làlana bebe kokoa an'ireo zotram-piaramanidina noho ny mahazatra ny lalàna.
Ny Departemantan'ny fitaterana any Etazonia (DOT) dia manana fitsipika vaovao momba ny halavan'ny fiaramanidina avela hijanona eo amin'ny tara ary amin'ny fepetra manao ahoana. Ny fanovana ireo fitsipika tarmac ireo dia nanomboka tamin'ny 2016 ary nanomboka tamin'ity taona ity ihany no nanomboka manan-kery. Ka tsy nisy tamin'ireny fiovan'ny lalàna ireny na ny areti-mifindra aza.
Na inona na inona seranam-piaramanidina, na fiara mpitatitra amerikanina na an'ny raharaham-bahiny io, dia afaka hipetraka amin'ny tara mandritra ny adiny telo ny sidina anatiny. Ho an'ny sidina iraisam-pirenena dia efatra ora ny fetra.
Mila misy ny fanambaràna iray momba ny fitazoman'ny tarmac amin'ny marika 30 minitra. Avy eo, amin'ny roa ora, ny lalàna dia milaza fa ny mpandeha dia tsy maintsy omena rano, sakafo ary fitsaboana amin'ny fiaramanidina raha ilaina izany. Misy ihany koa ny fepetra takiana fa miasa tanteraka ireo trano fidiovana amin'ny fiaramanidina.
Farany, raha vao miakatra ny marika telo / efatra ora dia manan-jo hiala ny fiaramanidina ny mpandeha. Matetika, rehefa mitranga izany dia nofoanana tsotra izao ny sidina noho ny fahatarana miampy (toy ny filàna fanesorana kitapo voamarina ary koa na inona na inona olana mety hitranga amin'ny ekipazy).
Raha jerena fa fitsangatsanganana an-habakabaka io, mazava ho azy, misy ny maningana. Ny mahazatra indrindra dia ny manapa-kevitra ny mpanamory fiaramanidina fa mila mijanona eo amin'ny tara ny fiaramanidina noho ny antony azo antoka. Zava-dehibe ihany koa ho an'ny mpandeha ny mahatakatra fa ny famantaranandro tara tara dia manomboka rehefa tsy afaka miala ny fiaramanidina ianao. Raha mipetraka eo am-bavahady ianao, dia mivoha ny varavarana ary afaka mivoaka ny sidina ireo mpandeha, mbola tsy manomboka ny famantaranandro.
Adriana Gonzalez, mpisolovava iray any Florida, dia mampahatsiahy antsika fa na dia mety hahatsapa aza ny seranam-piaramanidina fa manana antony marim-pototra hanemorana ny tara tara izy ireo, dia tsy tokony hadinontsika ilay olana lehibe indrindra eto:
"Mety milaza ny zotram-piaramanidina fa mahafeno ny fepetra takian'ny lalàna ho an'ny a tarmac hold dia ho lasa, amin'ny lafiny fampiharana, ho tena sarotra, satria mampihena ny serivisy fiaramanidina mandritra ny areti-mandringana. Ny zotram-piaramanidina dia mila mila malefaka kokoa amin'ny famaliana ireo mpandeha izay mijaly ary mila miala amin'ny fiaramanidina alohan'ny fotoana hampiharana ny lalàna mifehy ny tarmac mahazatra. Ny fahasalaman'ny mpandeha no tokony ho loha laharana foana. "
Avy amin'ny fomba fijerin'ny seranam-piaramanidina, nanjary sarotra kokoa ny mihazakazaka isaky ny sidina. Tsy ny fitomboan'ny risika ho an'ireo mpiasa anaty sidina ihany no mivezivezy ao an-trano ary manao ny serivisy mahazatra, fa ny fikorontanana eo amin'ny rojo famatsiana. Tsy ny zavatra rehetra atolotry ny sidina amin'ny habetsany ilaina dia mora azo ankehitriny toy ny tamin'ny fiandohan'ny taona 2020. Na dia mila miovaova aza ny mpandeha an-habakabaka ka misy fiantraikany amin'ireo zavatra mahafinaritra ireo ihany izany olana izany (toy ny fisafidianana mahazatra Sakafo maivana na manome alikaola fiaramanidina fiaramanidina), ny zavatra tokana tsy azo sorona dia ny fiarovana.
Ny tara tara amin'ny fotoana tsara indrindra dia mahita ny tontolo iainana an-tsambo ho voadona ara-pihetseham-po bebe kokoa isaky ny adiny ny tany. Ny fandehanana amin'ireo mpandeha mihozongozona amin'ny fahasosorana mankany amin'ny filalaovana ary misy toe-javatra misavorovoro an-tsambo dia zavatra tokony ho fantatry ny seranam-piaramanidina sy ho mora tohina mandritra ny volana vitsivitsy. Rehefa manandrana zatra manao dia lavitra indray isika rehetra, dia tsy tokony hanaraka ny lalàna rehetra natao hiarovana ny mpandeha fotsiny ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka fa diso amin'ny lafiny mihoatra izany.
nataon'i Aron Solomon
September 25, 2021 ao amin'ny 05: 19
Ny torohevitray momba ny dia an'izao tontolo izao dia mijanona ao amin'ny 'Aza mandeha' noho ny loza mety hitranga amin'ny asan-dahalo noho ny herisetra mahery setra sy ny herisetra ara-nofo ao amin'ny PNG. Fampahalalana momba ny fitiliana US vaovao sy ny takiana sarontava, ny fameperana ny dia ary ny fanovana ny dianao. Na misy fitsangantsanganana an-tsambo, sidina na fividianana dia. https://higherrank.net/